Sa dhowaw – Howard Center
Haka dhawaw Howard Center. May siiyaanee ariinyoo, dadka wiin, reeroo ka nool Gobolka Chittenden atheega dhamaasiran oo shal duwan oo aafimaatka maskanta, isticmaalka maandooriyaaga, ii hormariyowka naafa nimatha eh. May rajeeyaanee inii atha ku hela websaydkaana wal quseeya atheegoo ii illoo kaalmatha leh.
Hattii tan eta degdega aafimaatka eh, tafathal hanweer 9-1-1.
Hattii atha ama qofka kala oo atha kasaasa la kulumooya dhibaata, tafathal han weer 802-488-7777, Han weerowka Anka horeeye oo Gobolka Chittenden, atheegyaalkaana mobeelka ee dhibaatada 24/7/365. Taqtaryaalkaana may biyaana taageerada taleefonka ii qof haanta, qiimooyowka qof haanta, maamulowka dhibaatada oo muddu gaaban eh, an gudbiyowka atheegoo ka haboon, ii aqbaarta quseyta illoO bulshaatha.
Si atha an ka la hathala hubin shaqaalaga eh wal quseeya atheegyaalkaana, han weer 802-488-6000. Markii atha han weerta, may la hathalaasee shaqaalaga Howard Center kaas oo diyaariyi koro atheegoo turjubaanKA Oo han weerowka taleefonka eh oo bilaash kin eh.
Qaar ku mid eh atheegya bathan oo unu biina may ka jaraana:
Atheegoo qaathasha ii qiimeeyowka
Atheegoo dhibaatatha ii la taliyowka oo lanka tallagali ariinyoo, dadka wiin, ii reeroo
atheegoo taageeratha oo dadka qobaan naafanimada maskanta ii aqliga
atheegoo la taliyowka ii aafimaatka oo dadka qobaan xaalathoo isti’maalowka maandooriyaaga
atheegoo athag oo dadka qobaan dhibaatooyinka aafimaatka maskanka haliste eh ii joogtatha eh
atheegoo dugsiga walbarashadaada oo ariinyoo, dhalinyaraatha, ii dadka wiin oo dhalinyaraatha eh
taageeratha daganaanshaga ii atheegoo
May biyaanee daryeel ii daaweeyow nahariis leh. May ka kaalmeeyo kornee dadka mudda gaaban ama may ka aawiyi kornee nololiyoo oo dhon. May an kaalmeeyaanee dadka yar ii dadka wiin si isla mid eh. May ka kaalmeeyaanee dadka manyaalshoo, shaqatha, haafathoo baladka hoosa\_, ii illaa bulshathaana. May rajeeyaanee inii hattii an baahanta taageera ama atheega an dhabtii an aragta Kaalma inta laku helee.